China Base Mount (Coupling Door) PM2 Series DC Isolator Switch orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | FEIMAI
• Niorina tamin'ny lalamby ary niorina teo ivelan'ny varavarana ilay hazo
• Ny halavan'ny zorony dia azo alain'ny mpanjifa
• Pole 2, Pole 4 azo alaina (Tady tokana / avo roa heny)
• Label fanidiana
ADELS Series DC Isolator Switches dia ampiharina amin'ny l ~ 20 KW rafitra photovoltaic fonenana na ara-barotra, apetraka eo anelanelan'ny modules photovoltage sy ny inverters. Ny fotoana fampidirana dia latsaky ny 8ms, izay mitazona ny tontolon'ny masoandro azo antoka kokoa. Mba hiantohana ny fahamarinan-toerana sy ny androm-piainany maharitra, ny vokatray dia vita amin'ny singa manana kalitao faran'izay tsara. Max voltage dia hatramin'ny 1200V DC. Izy io dia mitazona fitarihana azo antoka amin'ireo vokatra mitovy amin'izany.
PM2 Series DC Isoator switch
Karazana FMPV16-PM2, FMPV25-PM2, FMPV32-PM2
Naoty amin'izao fotoana izao fohy (lcw) lkA.ls
Polarity Tsy misy polarity,,,+ ”A nd“ - ”azo ifanakalozana ny polarities
Ny PM2 Series DC Isolators dia natao manokana hanovana ny Direct Current (DC) amin'ny voltages hatramin'ny 1200Volts. Ny endrik'izy ireo matanjaka sy ny fahaizany manova ny voltages toy izany, raha oharina amin'ny onja ankehitriny, dia midika fa mifanaraka tsara izy ireo raha ampiasaina amin'ny fiovan'ny rafitra Photovoltaic (PV).
Mba hampihenana ny vintana amin'ny fampielezana arka, ny switch PM2 Series dia mampiasa teknolojia fifandraisan-davitra. Natao hanamboarana sy hanaparitahana ny fizaran-tany amin'ny alàlan'ny fivorian'ny fifandraisana roa heny izay mamafa rehefa mihetsika izy. Ny hetsika fafana dia manana tombony fanampiny amin'ny fitazonana ny tarehy mifanerasera amin'izay hampihena ny fanoherana ny fizaran-tany sy ny fampitomboana ny androm-piainan'ny switch.
Teo aloha: ELR1 Series Enclosed Version Lockable Rotary Handle DC Isolator Switch
Manaraka: Panel Mounting PM1-2P Series DC Isolator Switch